Wasiirka Arrimaha Dibadda ee UK oo Muqdisho booqday - BBC News Somali
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee UK oo Muqdisho booqday
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Britain Boris Johnson ayaa maanta magaalada Muqdisho ku tagay booqasho aan horay loo sii shaacinin. Waa booqashadii ugu horaysay ee uu ku tago Soomaaliya tan iyo markii uu xilka la wareegay.
Mr Johnson ayaa wadahadallo la qaatay madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Shir caalaami ah oo looga hadli doono Soomaaliya ayaa lagu wadaa in London lagu qabto bisha May.
Johnson ayaa sidoo kale safarkan ku maraya Kenya iyo Uganda, waana dadaal ay Britain ku doonayso in ay sare ugu qaado wax ka qabashada xaaladdaha bani'adannimo ee ka jira dalalka geeska Afrika.
booqashadan ayaa timid iyadoo hay'adaha gargaarka ee saldhigoodu yahay wadanka Ingiriiska ayaa maanta oo Arbaca waxay qabanayaan codsi wada jir ah mucaawino loogu ururinayo malaayiinta qof ee macaluushu ku soo foodsaartay Bariga Afrika.